FAQs ee deeq bixiyayaasha Cunnooyinka Taayirada - Cuntooyinka Shaagagga
Su'aalaha la Weydiiyo ee ku saabsan deeq-bixiyeyaasha Cuntada Lugaha
Ma qabtaa su'aal ku saabsan samaynta tabarucaadda Cunnooyinka Shaagagga? Halkan ka hel jawaabaha. Haddii aad kari weydo jawaabta su'aashaada, fadlan ha ka waaban nala soo xiriir.
Sideen ku ogaan karaa in deeqdaydu ammaan tahay?
Metro Meals on Wheels waxay si dhab ah u tixgelineysaa amnigaaga iyo sirtaada. Waxaan la shuraakownaa Nidaamyada Lacag-bixinta ee Heartland, oo ah maamule macaamil ganacsi oo lagu kalsoon yahay kumanaan ururro samafal ah, si loo hubiyo in macaamilkaagu uu sugan yahay oo macluumaadkaagu uu yahay mid ammaan ah. Ma la wadaagi doonno macluumaadkaaga shakhsiyeed qof kale, oo ay ku jiraan hay'adaha kale ee samafalka, sabab kasta ha noqotee. Eeg annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wixii intaa ka badan
Canshuurta tabaruca miyaa laga jari karaa?
Haa! Metro Meals on Wheels waa 501 (c) 3 hay'ad cashuur dhaaf ah, taasoo ka dhigaysa deeqdaada boqolkiiba boqol canshuur laga jari karo. Waxaad heli doontaa rasiid markaad dhammaystirto tabarucaada, oo ay tahay inaad u keydiso ujeedo canshuur.
Waa maxay lambarkaaga Aqoonsiga canshuurta?
Lambarka Aqoonsiga Canshuuraha waa 31-1501057.
Waa maxay siyaasadaada gaarka ah?
Waxaad ka heli kartaa siyaasadeena asturnaanta halkan.
Ma heli doonaa rasiid?
Haa. Markaad gudbiso deeqda khadka tooska ah, waxaad ka heli doontaa rasiid cinwaanka emaylka aad bixiso. Haddii aad noqotid deeq bixiye waara, waxaad heli doontaa rasiid bille ah oo loogu talagalay deeqdaada soo noqnoqota.
Ma arki karaa warbixinnada maaliyadeed ee ururkaaga?
Haa! Marka la joogo Metro Meals on Wheels, waxaan si xoogan u aaminsanahay inaan la wadaagno macluumaad muhiim ah macaamiisheenna, deeq-bixiyeyaasha iyo tabaruceyaasha. Arag warbixinnadii sanadlaha ahaa ee la soo dhaafay iyo foomamka cashuurta.
Sideen ku ogaadaa in tabarucaadayda si wanaagsan looga faa'iideysto?
Waxaan aad uga shaqaynaa si aan u noqono wakiilo wanaagsan oo wax ku darsada deeq-bixiyayaashu. Waxaad arki kartaa warbixintayada sanadlaha ah iyo xisaabaadka xisaabeedkeena warbixinnada bogga.